Wefdi ka socda golaha wakiillada Puntland oo ka qaybgalay xiritaanka shir dib loogu eegayay Dastuurka JFS oo ku soo xirmay Djibuuti – Kalfadhi
Wefdi ka socda golaha wakiillada Puntland oo ka qaybgalay xiritaanka shir dib loogu eegayay Dastuurka JFS oo ku soo xirmay Djibuuti
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed iyo wefdigiisii beryahan ku sugnaa dalka Jibuuti ayaa maanta ka qaybgalay shir dalkaas uga socday guddiyada dib-u-eegista iyo hirgelinta Dastuurka JFS.
Gudoomiyaha iyo wefdigiisa oo ay ku jiraan xubno ka tirsan golihiisa iyo mudanayaal federaalka ah oo laga soo doorto Puntland ayaa beryahan hawlo shaqo u joogay dalka Jibuuti.
Xildhibaan Sharmarke Garaad Saleebaan oo ka mid ah baarlamanka Federaalka ah ee Soomaaliya kana mid ah wefdiga gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland ayaa sheegay in ay kulankaas goobjoog ka noqdeen oo la tusay sida ay hawlaha dib-u-eegista dastuurku u socdaan.
“Dastuurku waa heshiis bulsho, hadaysan jirin heshiis ay bulsho leedahay umadaasi jiritaankeeda masii waarayo, sidaa darteed inta dastuurka wadanku qabyo yahay waxaa qabyo ah dowladnimadii iyo hay’adihii shaqayn lahaa” Ayuu yiri Sharmarke oo ka warbixiyay ka qaybgalka wefdigooda ee shirka ka socday Djibuuti.
Xildhibaanka ayaa soo dhoweeyay wada-shaqaynta guddiyada ku hawlan Dastuurka oo uu sheegay in mudo badan khilaaf ka dhex jiray balse hadda yeeshay jiho cusub oo ay ku wada shaqayn karaan.
Xildhibaan Fiqi oo Ciidanka DFS ee tagay Cadaado sheegay in ay ahayd in ay Al-Shabaab la dagaalaan
Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka oo sheegay in uusan jirin Baarlamaan Xukuumadda la xisaabtami karo